Amadoda imvana / iigusha zesikhumba iiglavu ezifakwe ngombala omnyama wendalo
Yenziwe ngofele lweegusha zase-Ethiopia, kunye noboya begusha, I-styling yeklasikhi efanelekileyo kuwo nawuphi na umsitho, ukusuka kwizinto eziqhelekileyo ukuya ezingubeni. Uboya begusha kunye nolwelwesi ucocekile kwaye ushushu. Ukuqina kunokuhlengahlengiswa kuwe kubungakanani ngombhinqo wesikhumba ngasemva.Okugqibelele kweglavu enye ebusika.
Amadoda amatakane egusha eboya begusha afakwe iiglavu zasebusika ngesandla
Le glavu yayibanjwe ngesandla ngamagcisa anamava angaphezulu kweminyaka eli-10. Okwenzelwe umsebenzi, ukuhlwa ngokuhlwa, okanye ukunxiba kwansuku zonke. Izandla zakho ziya kufudumala kwaye zicoceke ngekheya yoboya kunye nelining, eziziva zilungile kunxiba njengoko zijongeka, indibaniselwano egqibeleleyo! kuhle!
Yenziwe ngofele lweegusha zase-Ethiopia, kunye noboya begusha, I-styling yeklasikhi efanelekileyo kuwo nawuphi na umsitho, ukusuka kwizinto eziqhelekileyo ukuya ezingubeni. indibaniselwano egqibeleleyo yezixhobo ezigqwesileyo, iifashoni zakutshanje kunye nobugcisa obukhulu. Eyona glavu igqityiweyo ebusika.
Amadoda imvana / iigusha uboya begusha obufakwe iiglavu zasebusika NGESONDO SEBHOQO
Yenziwe ngethambo lase-Ethiopia iigusha i-PALM kunye ne-Wool Knitted Fabric Series, Ukudityaniswa kwezi zimbini, kunye neefashoni zamva nje, ubugcisa obukhulu. Khaphukhaphu, intuthuzelo, kunye nobuhle, indibaniselwano egqibeleleyo! Ayishushu kuphela, ipholile kakhulu!